Hey´addaha caafimaadka Norway oo Soomaalida ku amaanay dadaalka ay arintan ka sameeyeen. - NorSom News
Hey´addaha caafimaadka Norway oo Soomaalida ku amaanay dadaalka ay arintan ka sameeyeen.
Dr Abdirashiid Warsame: Cilmibaare caafimaad, kamid ahaa aqoonyahankii ka qeybqaatay wacyigalinta xanuunka Corona.
Sida uu qoray tv-ga qaranka Norway ee NRK, hey´addaha caafimaadka Norway, gaar ahaan hey´adda qaabilsan caafimaadka guud ee dadweynaha ayaa soomaalida ku amaanayo dadaalka ay ka galeen xakameynta faafitaanka xanuunka Corona, oo markii hore la sheegay inuu soomaalida aad ugu dhex faafay. Waxeyna xaqiijiyeen in xanuunka Corona-virus uu hada aad ugu yaraaday soomaalida dhexdeeda, sida laga arki karay tirokoobyadii soo baxay isbuucyadii lasoo dhaafay.
Warbixin uu maanta qoray NRK ayaa lagu sheegay in 91 oo Soomaaliya ku dhashay ay kamid ahaayeen 1084 qof oo isbitaalada Norway loo dhigay xanuunka Corona. Taas oo ka dhigan oo 8,4 % dadka isbitaalada loo dhigay xanuunka, ay ahaayeen soomaali. Balse wuxuu NRK qoray in guud ahaan isbuucyadii ugu danbeeyay uusan xanuunku soo ridan dad soomaali ah, taasna ay ka dhalatay shaqo ay qabteen bulshada soomaaliyeed ee Norway.
FHI: Soomaalida waa amaaneynaa shaqada ay qabteen.
Thor Indseth oo ah madaxa qeybta qaabilsan caafimaadka dadka soo galootiga ah ee hey´adda FHI ayaa soomaalida ku amaanay shaqada iyo dadaalka ay ka sameeyeen kahortaga faafitaanka xanuunka oo ay si fiican ugu guuleysteen. Isaga oo raaciyay in kadib markii ay arkeen tirada badan ee soomaalida ah ee xanuunku uu soo ritay, ay wada shaqeyn dhex martay wasaaradda caafimaadka Norway, Oslo kommune iyo warbaahinta NorSom News oo ah isha wararka ugu weyn ee soomaalida Norway.
Wuxuuna raaciyay in sababaha keeni karay in xanuunku uu soomaalida ku faafo ay kamid ahaayeen soomaalida oo ka shaqeyso shaqooyinka adeega dadweynaha, sida wadista tagaasida, bussaska, goobaha caafimaadka iyo kuwa dhaqmada.
NorSom News: wadashaqeynta soomaalida ayaa arintan sabab u ah.
Nrk ayaa sidoo kale wareystay tifaftiraha wargeyskan NorSom News, Said Mahamud Ali, wuxuuna cadeeyay in guusha laga gaaray xakameynta xanuunkan ee soomaalida dhexdeeda ay aheyd mid ku timid wadashaqeynta ay sameeyeen qeybaha kala duwan ee bulshada soomaalida ah ee Norway. Ayna aheyd wax ka dhashay soomaalida oo masuuliyada wax ka qabashada arintan si dhab u qaadatay.
Isaga oo sheegay in dhakhaatiirta soomaalida ah ee Norway degan iyo qeybaha kale ee bulshada soomaalida, ay si fiican uga shaqeeyeen wacyigalinta xanuunkan oo ugu danbeyn lagu guuleystay in soomaalida dhexdeeda uu ku yaraado.
Tifaftiraha NorSom News ayaa sidoo kale NRK u sheegay in qibrada muhiimka ah ee laga dhexlay arintan, in qofka ugu fiican ee qof kale ee soomaali ah wax u sheegi karo uu yahay, soomaali kale oo aqoon u leh mowduuca markaas laga hadlayo.
NRK: 91 norsksomaliere var innlagt for korona – nå er smitten nesten null.
Previous articleNå er smitten nesten borte i det norsk-somaliske miljøet, som berømmes av Folkehelseinstituttet.
Next articleAabahay oo dhiig qufacaya ayay kula taliyeen guriga joog, ilaa xaaladiisa ay halis noqotay, inta uusan geeriyoon.